Dammaqi Oromoo ! Qabsoo Oromoo gara dabarsuuf yoo isheedhaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDammaqi Oromoo ! Qabsoo Oromoo gara dabarsuuf yoo isheedhaa
Dammaqi Oromoo ! Qabsoo Oromoo gara dabarsuuf yoo isheedhaa mijate ammoo dhabamsiisuuf Wayyaaneen dhagaa isheen hin buqqisin hin jiru.
Sagantaan dhumiinsa ilmaan Oromoo irra kallattii adda addaatiin deemaa jiruu fi daangaa Oromiyaa cirtee biyyoota ollaatti daangessuun madda walitti bu’insaa gadhachaa jirtu kun kan yeroo dheeraaf irratti hojjetamaa turedha. Sagantaa Mallas Zeenawwii karoora yeroo dheeraa lafa kaa’ee deeme har’a yeroo isaa eeggatee dhowaa jiru ta’uu namuu hubachuu qaba.
“Bal’ina lafa Oromiyaa hiphisuun, guddina uummata Oromoos xiqqeessuun akka danda’amu” dubbachuu isaa namuu quba ni qaba. Kana keessaa wanni har’a yeroo isaa eeggatee daangaalee Oromiyaa irraa dhowaa jiru isuma kana. Daangaan Oromiyaa naanneffamee dhuka’aan owwaalamaa tureera. Kun ammoo hara yeroo qabsoo bilisummaa finiinsaa jirru qofaa miti utuma bilisummaan jennu sunuu argamee kan dhaabbatu hin ta’u. Akka wal-qossaanetti, namuu guyyaa humna horate ka’ee ibidda darbachuuf waan jiru ta’a.
Gama kaaniin Wayyaaneen kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO diiguuf toftaalee garaagaraa fayyadamaa as geesseetti. Haa ta’u malee akka yaaddee fi tuffattee kaatetti itti milkaawuu hin dandeenye. Garuu yaaluu fi toftaa adda addaa fayyadamuu irraa hin dhaabbanne. Isaan kana keessaa tokko ABO keessatti of ijaartee diina tarsiimoo ta’uun dhaabicha keessatti yeroodhaa gara yerootti fofoxoqinsa uumuudha. Kanas hanga tokko itti milkoofteetti. ABOn garuu sana irra aanee yeroo inni caalaatti of ijaaree as ba’u kanatti waan qabdee gadhiistu dhabdeetti. Bobaa ishee jalatti of ijaaree 1/5 (tokko-shanee) ishee diiguu irratti milkaaweera. QEERROO BILISUMMAA OROMOO ijaaruun taayitaa ishee raase. Ilmaan Oromoo keessatti humna isaa gad-dhaabee tokkummaa Oromoon qabu addunyaa irratti mul’ise. Oromoon akka inni bilisummaa isaatiif kutatee ka’e mirakaneesse.
Kun osoo kanaan jiruu, haa ta’utii kanaafis Wayyaaneen raftee hin bulle. Oromoota xiqqaa guddaa, dhiiraa dhalaa, jaarsaa jaartii osoo hin jenne ka’ee caasaa ishee diigee lubbuu itti guraare kana dadhabsiisuu fi facaasuu qabdi. Sodaan Wayyaanee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, ibidda bobaa ishee jalaa ture. Irrati xiyyeeffatte. Kana humna humna isaa dadhabsiistu ykn facaastu male nagaan raftee buluu hin dandeessu. Kanaafoo? Qeerroo keessatti Qeerroo ijaaruudha. Isa kanaaf haalli mijatan qaama dhageettii argachuu mala jettee itti amante, warreen ABO mormanii fi fedhummaa dhuunfaaf fiigan, har’a afaan qabuun garuu hundee hin qabne uummataa fi dargaggoota biyya keessaa sab-quunnamtii hawaasaa of harkaa qabuun ajaja qaqqal’aa dabarsuun na argaa na argaa jechaa jiru Jawar S. Mohameditti fayyadamuudha.
Yeroo ammaa waan qabsoo Oromoof bu’aa buuse itti fakkaatee Jawar S. Mohamed tokkummaa ilmaan Oromoo keessatti summii addaa owwaalaa jira. Qeerroo Bilisummaa Oromoo kaleessa hin jiru jedhanii jireenya isaa haalaa turan, yeroo inni humnan isaan cabsee as ba’u ammoo nutu hooggana, Qeerroon Bilisummaa Oromoo hooggana hin qabu jechaa ba’an as deebi’anii Qeerroo Oromiyaa malee Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan jedhu hin jiru jechuu eegalaniiru.
Egaa Oromoo! qabsoon Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee kaleessa Wayyaanee kursii irraa raasaa ture garamitti akka inni deemuuf jiru hubadhaa. Gadi taa’aa xiinxalaa. Fofoxxoqinsi kaleessa ABO keessatti uumamaa turee qabsoo keenya boodatti harkise har’a ammoo Oromoota biyya keessaa tokkummaa isaanii ijaarratanii, diyaspooraadhaan yoodandeessan sagalee keessan nuuf dhageessisaa yoo dadhabdan nurra callisaa jechaa turan, faca’uu fi xiyyeeffannaa diinaa ta’uuf hakka deemu ammumaa hubachun barbaachisaadha. Garri itti deemaa jirru yaaddessaadha, Dammaqi Oromoo. Dhaaba kee ABO deebisii gad-dhaabbadhuu bira ijaajji, WBO humna jabeessi. Qeerroo Bilisummaa Oromoo humnatti jijjiiruu irratti halakanii fi guyyaa hojjedhuu bira dhaabbadhu. Daangaan Oromoo har’a dhiigaa jiru Qeerroo Blisummaa Oromoo fi WBOdhaan, Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatiin furmaata argata. Hanga Wayyaaneen taayitaa irra jirtutti faffaca’inni keenyaa fi dhiiguun keenya itti fufa. Kanaafuu “Dammaqi Oromoo!!!” diina kee bari.
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!!!
May Allaah Grant you by Jannatul Firdows Our Brother,
“An emotional funeral Service for Abduljabar Mohammed, a young man who was killed yesterday by the Agazi in Kara Mille , East Hararge”.
Rabbiin Jannatul Firdowsiin Si haa Qananiisu,
“Sirna awwaalchaa Abdujabbaar Muhammed, Qeerroo kaleessa harka Agaazitiin Kaarra Miilleetti wareegame. Sirni kabajaa akkanaa kun Oromiyaa cufatti baratamuu qaba”.
Abbaan Biyyaa ABOdha!!! Must Watch: 15/09/17 Viva Viva Qeerroo Bilisummaa
Guyyaa Arraa Harargee Bahaa Qeerroon Ona Jaarsoo Magaalaa Ejersa Goroo “Abbaan Biyyaa ABOdha Jachuun Dhaadachaa FXG biyyooleeysaa finiinsuun wayyaaneef Ergamtoota Isii Abdii Kutachiisanii jiran.
faaruu wbo kan baraa1991 mee dhagefadhaa akkati namati toluu gotowan duraa
President Abdi Mohamud Omar when he swimming ? My Question where is Lammaa Magarsaa ?